‘Madzishe batsiraiwo kurwisa mhirizhonga’
Ã‚Â PAMUSHA ZVIKAMU ZVENHAUNHAU DZEMUNO NHAU DZEVARIMI ZVAKANANGANA NEMADZIMAI NHAU DZEUTANO NHAU DZEMITAMBO NGOMA NEHOSHO Blogs MAERERANO NEZIMPAPERS ZVEKUSHANDISA ZVIRI MUDURA TIBATEI PANO MAPEPANHAUThe Herald The Sunday Mail Sunday News Chronicle Kwayedza Manica Post H-Metro Thursday, May 23rd	Headlines: ‘Murume wangu ane chirwere chekunyepa’
‘Madzishe batsiraiwo kurwisa mhirizhonga’	Thursday, 15 December 2011 10:50	View Comments
neMunyori weKwayedzaGURUKOTA rinoona nezvemadzimai, kuenzaniswa kwemikana nekusimudzirwa kwevanhu munharaunda, Cde Olivia Muchena vanokurudzira madzishe kuti abatane neveruzhinji mukurwisa nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Vakataura mashoko aya pazuva rekupemberera mazuva 16 ekurwisa nyaya dzemhirizhonga pachiitiko chaiva muHarare chichitungamirirwa nesangano rePadare/Enkudleni, svondo radarika.“Mhuri zhinji dzakaparara nekuda kwemhirizhonga, zuva nezuva vemapepanhau vanobudisa nyaya dzekuurayana nematemo kana kudirana mvura inopisa. “Sei tichishaya runyararo mudzimba dzedu? Madzishe nevatungamiriri vese chii chaiitika munyika, misha kana yoparara zvakadai? Aiwa tinoda kuti tibatane tipedze matambudziko iwaya,” vakadaro Cde Muchena.Vakati zvinorwadza kuti gore rino nyaya dzinodarika 2 500 dzemhirizhonga dzakamhan’arwa.
“Izvi zvinoreva kuti pazuva rimwe nerimwe rakasikwa naMwari vanhu vatanhatu vari kutambudzwa nenyaya idzi. Chikamu chinodarika 90% chiri kunyanya kutambudzwa ndeche madzimai nevana izvo zvinoreva kuti vanababa ngarive basa redu rekupedza mhirizhonga mudzimba,” vakadaro.
Vakati gore rakapera kwakamhan’arwa nyaya dzerudzi urwu 1 200.Gore rino mhemberero idzi dzakaitwa pasi pedingindira rinoti “Runyararo rwunotangira mumba, rwopinda munyika: Ngatirwisei mhando dzose dzemhirizhonga”.
Pazuva iri vakomana vechidiki vanove nhengo dzePadare Junior Council vakafora muguta reHarare vachiratidzira zvinyorwa zvekurwisa nyaya dzemhirizhonga.Sachigaro wePadare/Enkudleni, vaJonah Gokova, vakati vana vazhinji vari kusara vave nherera nekuda kwemhirizhonga uye HIV.
“Nyaya dzekumanikidzirana bonde dzinoita kuti vanhu vapedzisire vave kutapurirana HIV vana vosara vasina vachengeti. Mhirizhonga inodzikisira kusimukira kweupfumi hwenyika nekuti vanhu vanokuvadzana vorovha kumabasa,” vakadaro VaGokova.-Kwayedza
Asiagate yakandipedza mafuta: Masomere ‘Monya for hire’ simbi yeDeMbare
Andy Murray onetswa nemusana
Andy Carroll woenda kuLiverpool
Mosquito oda kutanga chikoro chetsiva